September 6, 2013 – democracy for burma
Thai gangs extort money from Myanmar migrant workers
On September 6, 2013 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
Thai law enforcement officers in Yangon has been turningablind eye to againstagroup of Thai gangs that have been extorting money from Myanmar migrant workers passing throughaferry port on their back to home, according to migrant workers.
Many of the returning workers, some of whom had been working abroad for more thanadecade, said the local Thai police are aware of the extortion activities and at times, cooperate with the local gangs, possibly in return forashare of the extorted money, the workers said.
The gang resides in Pha Nam Island, on the other side of Ranong and includes around 20 members. The gang works in groups and is lead by Phisat (or) Mr. Moustache and his four brothers. The gang comes to Phanphalar ferry port Pha Nam Island around5am every morning and extort money in various ways from Myanmar migrant workers who were brought to the ferry port by the gang leader Phisat, the migrant workers say.
“Phisat goes to Ranong highway bus gate with his rental car. He forces Myanmar workers in his car and charges 200 bahts (US$6) each. After the car arrived at Phanpalar ferry port, his gang checked the passports of the workers and ask for another 100 bahts (US$3) each. When the immigration gate hasn’t opened yet, they ask 200 bahts each to transport the workers from other way around. Even when the gate is opened, they ask for more money by giving various reasons like port fee, warehouse fee, goods fee, book overdue fee, and writing fee. A worker who returns back to Myanmar has to pay at least 500 bahts (US$15) to them. If the workers don’t give them, the gang slaps, hits, and kicks them regardless of age or sex,” saidaMyanmar worker who works at Phanpalar ferry port.
The migrant workers have accused the Thai police of pretending not to see the gang harassing the migrant workers and failing to take actions even though the gang has been caught in action on the CCTV cameras.
When the migrant workers report the gang to the police, they arrest the migrant workers after checking their backgrounds and hand them over the gang so the migrant workers are afraid to report to the authorities, the migrant workers say.
“The gang shove and hit those who don’t show their passports. When the workers got on the boat, they ask the boatman to get the money from the passengers. They hit the boatman if he refuses. As the boatman has to do this every day, he has to convince the passengers to give the money to the gang. If the passengers refuse to pay, they won’t allow the boat to depart. Nobody dares to report to the police because they are working together with the gang,” said another Myanmar worker from the Phanpalar ferry port.
He added that some Myanmar boatmen have become the lackeys of the gang and also take advantage on the migrant workers because they are afraid of the gang and they get beaten in the areas that are hidden from the CCTV cameras.
Jailed activist Naw Ohn Hla is on Hunger Strike in prison
On September 6, 2013 September 6, 2013 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
Myanmar’s jailed activist Naw Ohn Hla is on hunger in prison, according to local sources.
She was givenatwo-year sentence for protest without official permission against the controversial Letpadaungtaung Copper Mine project in Monywa City in central Myanmar.
And she has been on hunger strike since August 29 when she was sentenced for two years in prison with hard labour by Monywa Township Court.
Dr. Myo Min, government doctor from Mandalay Prison, has been closely watching her health. She was in normal health although she lost about four pounds, according to medical records taken till September 5.
During her protest on August9in Monywa, she demanded that the Letpadaungtaung Copper Mine project be stopped completely, 2008 Constitution be amended, to discharge Hla Htun who is the chairman for Letpadaungtaung Copper Mine Implementing Committee, and to take legal action on police officers who tortured the people.
Naw Ohn Hla was arrested on August 13 when she was on her way back to Monywa from Letpadaungtaung area in Sagaing Region.
Monywa Township Administrator Nyunt Soe put her on trial at the township court and she was given the sentence with Section 505 (b).
၅-၉-၂၀၁၃ ရက်နေ့ ၀၄၄၅ အချိန် တာချီလိတ်မူးယစ်(အထူး)အဖွဲ့မှတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊ တာချီလိတ်ခရိုင် ရဲတပ်ဖွဲ့မှတပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် နယ်မြေခံတပ်မှတပ်မတော်သားများပါဝင်သော ပူးပေါင်းအဖွဲ့သည် သတင်းအရ သက်သေများနှင့်အတူ ကျိုင်းလပ်မြို့နယ်ခွဲ၊ ကျခမ်းဆောင်ရွာနေ အိုက်ဆေ(ခ)အားဆေ(၄၂)နှစ်၏နေအိမ်အား ၀င်ရောက်ရှာဖွေခဲ့သည်။ ထိုသို့ရှာဖွေရာ အိုက်ဆေ(ခ)အားဆေ၏သမက်ဖြစ်သူ အိုက်မား(၂၆)နှစ်အား တွေ့ရှိရပြီး နေအိမ်အတွင်းမှ ကဖင်း(၃၀)ကီလို၊ တန်ဘိုးငွေကျပ်(၂၂.၅)သိန်း၊ ၄၀ မမဗုံးသီး ၂၆၅ လုံး၊ ဗု-၄၇ ကျည် ၁၀၀၀ တောင့်နှင့် ကျည်အိမ် ၆ ခုတို့အား သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သည်။ ထို့နောက် ပူးပေါင်းအဖွဲ့သည် ကျိုင်းလပ်မြို့နယ်ခွဲ၊ ပါပူးကျေးရွာရှိ အိုက်ဆေ(ခ)အားဆေ၏နေအိမ်အား ဆက်လက်ရှာဖွေရာ အိုက်ဆေ(ခ) အားဆေ၏ဇနီးဖြစ်သူ မလိုဒေါ(၄၁)နှစ်အားတွေ့ရှိရပြီး နေအိမ်မှ စိတ်ကြွရူးသွပ်ဆေးပြားအကြေ ၁၅ ဂရမ်၊ ဘိန်းစိမ်း ၈၀ ဂရမ်၊ စုစုပေါင်းတန်ဘိုးငွေကျပ်(၃.၈)သိန်းနှင့် ကိုးလုံးကျည် ၁၂ တောင့်တို့အား ထပ်မံ သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သဖြင့် အိုက်မားနှင့်အိုက်ဆေ(ခ)အားဆေတို့ ၂ ဦးအား ကျိုင်းလပ်နယ်မြေရဲစခန်း မယ(ပ) ၃/၂၀၁၃၊ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသောဆေးဝါးများဆိုင်ရာဥပဒေပုဒ်မ ၁၅/၁၆(ခ)/၂၂(ခ)/ ၂၁ ဖြင့်လည်းကောင်း၊ မလိုဒေါ(၄၁)နှင့်အိုက်ဆေ(ခ)အားဆေတို့ ၂ ဦးအား မယ(ပ)၄/၂၀၁၃၊ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသောဆေးဝါးများဆိုင်ရာဥပဒေပုဒ်မ ၁၅/၁၉(က)/၂၂(ခ)/၂၁ ဖြင့် လည်းကောင်း အသီးသီးအမှုဖွင့်အရေးယူထားကြောင်းနှင့် ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေသူ အိုက်ဆေ(ခ)အားဆေအား ဖမ်းဆီးရမိရေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
အတွက် လျှောက်ထားနိုင်စေရန်ဖြစ်ပါသည်။ Continue reading “ATTENTION: ဒုက္ခသည် (သို.မဟုတ်) ခိုလှုံခွင့်တောင်းခံလိုသူများအတွက်အကြံပေးချက်-Up-date Issue, UNHCR Kuala Lumpur, Malaysia” →
ဆရာတော်ဘုရာ တပည့်တော်အကူအညီတောင်းပရစေဘုရား ဆရာတော်ဘုရားတပည့်တော်မောင်လေးကိုမြည်မာပြည်ကိုခေါ်ပေးပါဘုရားမလေးရှားနိုင်ငံကွာလာလန်ပူမှ ကပုန်းနာရေးကူညီမှု အသင်းမှာကျန့်ကြာနေပါတယ်ဘုရား အပြင်ကိုလဲမထွက်ရဲပါဘူးဘုရား ဆရာတော်ပို့မှရောက်နိုင်မှာပါဘုရားအကူအညီမဲ့နေပါတယ်ဘုရားအရမ်းဒုက္ခရောက်နေပါတယ်ဘုရား ၂၁.၆.၁၃ – နေ့မှာမြန်မာ့သ့ရုံးမှနိုင်ငံသားဖြစ်ကြောင်းအသိအမှတ်ပြုပြီးပါပြီဘုရား No-6B/10915/13-ကပုန်းနာရေးကူညီမှုအသင်းမှရထားသောနံပါတ်ပါဘုရား ဆရာတော်ပို့ပေးမှရောက်နိုင်မှာပါဘုရား နေရပ်လိပ်စာမှာ-စိုင်းကြည်မောင် အမှတ် ၈/၇၈၈ ကျောင်မဲမြို့ /ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ကိုင်ဆောင်သောမလေးရှားဖုန်းနံပါတ်မှာတော့ Ph-0060192589415 ၊ 0060193649937 (ကလန်း)မလေးရှား ရိုသေလေးစားစွာဖြင့် Message ပို့သူမှာ-တပည်တော် ဒေါနန်းမြင့်ရီ ကထိက အရှေ့တိုင်းပညာငှာန လားရှိုးတက္ကသိုလ်….
ARAKAN TIMES: မလေးရှားရောက် ရခိုင်လူမျိုးများ UNHCR ၏ ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းကို ခံနေရ
UN ကဒ် မရရှိသော ရခိုင်အမျိုးသားတစ်ဦးဖြစ်သူ မျိုးရခိုင် က ” မလေးရှားမှာ မြန်မာနိုင်ငံက တိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးကို UN ကဒ် ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ UNHCR က ကြေညာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကြေညာစာတမ်း ထွက်လာတဲ့ အချိန်မှာ ရခိုင်မပါလာဘဲ ရခိုင်ကို လူမျိုးကြီးဆိုပြီး ဗမာလူမျိုးနဲ့ တန်းတူဆိုပြီးတော့ ခွဲခြားထားပါတယ်။ အစိုးရနဲ့ တန်းတူဖြစ်တယ်။ အဓိကတော့ ရခိုင်တွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အဖိနှိပ်ခံ မဟုတ်ဘူးပေါ့။ ဗမာနဲ့တန်းတူ လူမျိုးကြီးအထဲမှာ ထားပါတယ်။ အဲဒီလို ကျနော်တို့ကို UNHCR က ခွဲခြားပါတယ်။ ” ဟု ပြောသည်။
ဗမာလူမျိုးကို UNHCR က ကဒ်ထုတ်မပေးရသော အကြောင်းရင်းမှာ ” ဗမာဟာ လူမျိုးကြီးဖြစ်တယ်။ အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာ အုပ်ချုပ်နေတာဟာ ဗမာလူမျိုးဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် ဗမာဟာ ဖိနှိပ်ခံမဟုတ်တဲ့ လူမျိုးဖြစ်တယ်။ ကျန်တိုင်းရင်းသားတွေက ဖိနှိပ်ခံလူမျိုးတွေဖြစ်တယ်။ မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာ ဗမာလူမျိုးဟာ အခွင့်အရေး အများကြီး ရတယ်လို့ UNHCR က သတ်မှတ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုပဲ ရခိုင်တွေဟာ ဖိနှိပ်ခံ လူမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ ဗမာနဲ့ တန်းတူထားပါတယ်။ တကယ်တော့ ရခိုင်တွေဟာ စစ်အစိုးရ အဆက်ဆက် ယခုအချိန်ထိပေါ့နော် ဖိနှိပ်ခံ ဘ၀ပါပဲ။ ဥပမာ – ရေနံနဲ့ ရွှေသဘောဝ ဓါတ်ငွေ စီမံကိန်းကိစ္စတွေမှာ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်ခံနေရတာတွေ၊ မြေယာအသိမ်းခံနေရတာတွေ၊ နောက် တခြားလူမှုရေးပေါ့နော် ကိစ္စတွေမှာ ဖိနှိပ်ခံနေရတာတွေကို သူတို့က မသိဘူး။ ” ဟု ၄င်းကဆိုသည်။
” ဆန္ဒဖော်ထုတ်တဲ့အခါမှာ ကျနော်တို့ တောင်းဆိုသွားမှာကတော့ ကျနော်တို့ ရခိုင်ပြည်မှာ ရေနံရွှေသဘာဝ ဓါတ်ငွေ့ထုတ်ယူတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ မြေယာသိမ်းတာတွေ၊ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်ခံနေရတာတွေ၊ UNHCR ရုံးကလည်း ဒုက္ခသည်အပေါ်မှာ ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်း မရှိဘူးဆိုပြီးတော့ ဒီမှာ တရားဝင် ကြေညာထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျနော်တို့က ဘာကြောင့် ခွဲခြားဆက်ဆံရတာလဲ ဆိုတာကို မေးမယ်။ ပြီးတော့ မလေးရှားမှာ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ ရခိုင်လူမျိုးတွေရဲ့ ဒုက္ခရောက်နေကြတဲ့ ပုံတွေကို တင်ပြသွားမယ်။ ကျနော်တို့ ရခိုင်တွေကလည်း UNHCR က ခွဲခြားဆက်ဆံလိုက်တဲ့အတွက် တအားကြီး စိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြတယ်။ ” ဟု ၄င်းက ဆိုသည်။
ဟာဂျုလီ ကသာ သတင်း ABSDF (မြောက်ပိုင်း) ခေါင်းဆောင်များအား KIA မှ လက်နက်သိမ်း ဆည်း ပြီး အကျယ်ချုပ်ချထား
On September 6, 2013 September 11, 2013 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
ABSDF ( North) ဥက္ကဌ အဖွဲ့နှင့် KIO ခေါင်းဆောင် များ တွေ့ ဆုံ
( Min Htay )
ထိုကဲ့သို့သော နိုင်ငံရေး တွေ့ဆုံဆွေးနွေး ပွဲများ ကျင်းပပေးမှ သာလျှင် နိုင်ငံရေး အရ သဘော တူညီချက်များ ရရှိ လာပါက အာမခံချက် ရှိပြီး အစိုးရ ဘက်မှ မျှော်မှန်း ထားသည့် စစ်မှန်သည့် ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးများ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း KIO/KIA ဘက်က အဆိုပြု သွားခဲ့ပါသည်။
ဤပြောဆိုချက်များ အတွက် ယင်းဆွေးနွေးပွဲသို့ တက်ရောက် ခဲ့သော ဗိုလ်မှူးကြီး ဇော်သောင်းနှင့် ဆရာလနန်းတို့အား ဆက်သွယ် မေးမြန်း ခဲ့သော်လည်း မရရှိခဲ့ပေ။
မကဒတ ဥက္ကဌ ရဲဘော် သံခဲသည် စက်တင်တာလ ၁၀ ရက်နေ့ နံနက် ၁၀ နာရီတွင် အလုပ် အမှုဆောင် ကော်မတီ ဆလိုင်းမျိုးအောင်၊ မြောက်ပိုင်း မကဒတ အဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိ ခေါင်းဆောင် ၂ ဦးနှင့် အတူ KIO လိုင်ဇာ ဗဟိုဌာန ချုပ် စခန်းသို့ သွားရောက် တွေ့ဆုံ ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ယင်းမကဒတ ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့အား ကချင်ပြည် လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော်ဒု-စစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ် ဂွမ်မော်ဦးဆောင်ပြီး ၊တွဲဖက် အတွင်းရေးမှူး ဆရာလနန်းနှင့် မဟာဗျုဟာ လေ့လာရေး ဌာန ညွန်ချုပ် ဗိုလ်မှူးကြီး ဇော်သောင်း တို့ကကြိုဆို ခဲ့ပါသည်။
ဥက္ကဌ ဦးသံခဲသည် အစိုးရနှင့် လက်မှတ် ရေးထိုး ထားသည့် ပြည်နယ် အဆင့်နှင့် ပြည်ထောင်စု အဆင့် အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး အခြေအနေများကို ရှင်းလင်း တင်ပြခဲ့ကြောင်း ဗိုလ်မှူး မင်းဌေးက ဆိုပါသည်။
မကဒတသည် ခိုင်မာသော ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးများ ပေါ်ပေါက် လာစေရန် အတွက် ဆက်လက် ဆွေးနွေးမှုများ လုပ်ဆောင် သွားမည် ဖြစ်သော်လည်း မကဒတ အဖွဲ့၏ ဦးတည်ချက် အတိုင်း တိုင်းရင်းသား ပေါင်းစုံ လွတ်မြောက်ရေး အတွက် ဆက်လက် တိုက်ပွဲ ဝင်နေမည်သာ ဖြစ်ကြောင်းလည်း တင်ပြခဲ့ပါသည်။
ဤသို့ကြောင့် အစိုးရမှ ဖော်ဆောင်နေသည့် တနိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး လက်မှတ် ရေးထိုးပွဲ အခမ်းအနားအား မကဒတ အဖွဲ့အနေဖြင့် တက်ရောက်မည် မတက်ရောက်မည် ဆိုသည်ကိုလည်း တိုင်းရင်းသားများ၏ သဘောထား ညီညွတ်မှု အပေါ်၌ မူတည်နေသည်ဟု ဗိုလ်မှူး မင်းဌေးက ဆိုပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံလုံး ဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ် တပ်ဦး (ABSDF) သည် ညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ ဖက်ဒရယ် ကောင်စီ (UNFC) ၏ အဖွဲ့ဝင် ဖြစ်ရေးကို လျှောက်ထား ခဲ့သော အဖွဲ့ဖြစ်ပါသည်။
ABSDF ကျောင်းသား တပ်မတော်နှင့် ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်း ကော်မတီ ဒုဥက္ကဌ ဦးအောင်မင်း ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့တို့နှင့် အလွတ် သဘော (၃) ကြိမ်၊ ကြိုတင် ပြင်ဆင်ရေး အလုပ် အဖွဲ့(၂) ကြိမ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေး ခဲ့ကြပြီးမှ အပစ်အခတ် ရပ်စဲနိုင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
၄င်းတို့သည် မြဝတီမြို့၌ ဆက်ဆံရေးရုံး ဖွင့်လှစ်နိုင်ရေး အတွက် ကရင် ပြည်နယ် အစိုးရ အဖွဲ့နှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေး ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံလုံး ဆိုင်ရာ ကျောင်းသား တပ်မတော်သည် ၁၉၈၈ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ (၁) ရက်နေ့က စတင် ဖွဲ့စည်း ခဲ့ပါသည်။ လက်ရှိတွင် တပ်ရင်းပေါင်း (၁၁) ရင်းခန့်ရှိပြီး မဟာမိတ် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့များတို့နှင့် အတူ ပူးတွဲ စစ်ဆင်ရေးများ ဆင်နွှဲ ခဲ့ပါသည်။ ကချင်ပြည်နယ်တွင် ရှိနေသော ABSDF မြောက်ပိုင်း အဖွဲ့သည်လည်း KIO နှင့် လက်တွဲပြီး အစိုးရ စစ်ဆင်ရေး များကို ရင်ဆိုင် တိုက်ခိုက် ခဲ့ပါသည်။
real or fake? ABSDF (မြောက်ပိုင်း) ခေါင်းဆောင်များအား KIA မှ လက်နက်သိမ်း ဆည်း ပြီး အကျယ်ချုပ်ချထား
KIA နယ်မြေတွင်း အခြေစိုက် စခန်းချလျှက်ရှိသော ABSDF (မြောက်ပိုင်း) တပ်ဖွဲ့ဝင်များကို သြဂုတ်လ ၂၈ ရက်နေ့မှစပြီး KIA ဗဟိုဌာနချုပ်မှ လက်နက် များ ပြည်လည်သိမ်း ဆည်း ကာ နေအိမ်အကျယ်ချုပ် ဖြင့်ထားရှိ ကြောင်း ABSDF မြောက်ပိုင်းအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးမှ ပြောကြားခဲ့သည်။ ၎င်းမှ လက်ရှိဖြစ်နေ သည့် ပြဿနာမှာABSDF မှ အစိုးရနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးခဲ့ မှုကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း အောက်ပါအတိုင်းပြောကြားခဲ့သည်။
တယ်… အခု ABSDF ဥက္ကဌ ကိုသံခဲတို့က အစိုးရနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲမှာ မြောက်ပိုင်း ကအဖွဲ့တွေလဲပါလာတော့ KIA ရဲ့ ခွင့်ပြုချက်မရပဲ လုပ်တယ်ဆိုပြီး လက်နက်တွေ အကုန်လိုက်သိမ်းတယ်… ခေါင်းဆောင်တွေကိုလည်း အိမ်မှာပဲနေခိုင်းပြီး စောင့်ကြည့်နေတယ်…” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။ယခုနှစ်အတွင်း အစိုးရငြိမ်းချမ်းရေး ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ နှင့် ABSDF တို့ မေ လတွင် တစ်ကြိမ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၁ ရက်နေ့တွင် တစ်ကြိမ်၊ သြဂုတ်လ ၄ ရက်နေ့ တွင် တစ်ကြိမ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး သြဂုတ်လ ၄ ရက်နေ့ ဆွေးနွေး ပွဲတွင် ABSDF ဥက္ကဌ ကိုသံခဲနှင့် အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်းတို့ ကိုယ်တိုင်တွေ့ဆုံကာ နှစ်ဖက် သဘောတူ စာချုပ်များ ချုပ်ဆိုနိုင်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် သြဂုတ်လ ၂၈ ရက်နေ့တွင် KIA မှ ABSDF အား ထောက်ပံ့ထားသည့် လက်နက် ခဲယမ်းအားလုံးကို ပြန်လည်းသိမ်း ဆည်းကာ အဖွဲ့ဝင်များကိုလည်း အကျယ်ချုပ်ဖြင့် ထိန်းသိမ်းထား………………..